Madaxweynaha Soomaaliya oo Faah-faahiyay kulammo Madaxda Midowga Yurub uu kula yeeshay dalka Belgium
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Belgium ayaa faahfaahin ka bixiyay kulammo uu la yeeshay madaxda Midowga Yurub, kuwaasoo looga hadlay sidii dowladda uu hoggaaminayo gacan looga siin lahaa dib-u-dhiska dalka.
Haween markii ugu horeeysay ka mid noqonaya ciidamada militariga dowladda Soomaaliya oo tababar looga furay Baladweyne
Saraakiisha ciidamada maamulka gobolka Hiiraan ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti ee howlgalka midowgga Africa AMISOM ayaa markii ugu horeysay magaalada Baladweyne tababar uga furay haween ka mid noqonaya ciidamada militariga dowladda Soomaaliya.
Ra’isul wasaare Saacid iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo Gaaray Magaalada Marka
Ishii Buktaay ku Bikaacso & M-Yurub oo Aqoonsaday Dawlada (Top Video)
Dhinaca kale Midowga Yurub Ayaa Shaaciyey Inay Si Rasmi ah u Aqoonsadeen Dawlada Soomaaliya Isla markaana Ay La Shaqayn Doonaan.
Xukuumadda Soomaaliya oo ku eedeysay maamullada gobollada in aysan xiriir la laheyn shacabkooda
Wasiirrka wasaarrada arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka xukuumada Soomaaliya ayaa ku eedeysay maamulada ka jira gobollada dalka qaarkood in aysan xiriir wada shaqeyn ah la laheyn shacabka ay mas’uulka ka yihiin.
Weeraro xalay ka dhacay garoonka dayuuradaha magaalada Baydhabo iyo degaanka Goof guduud
Dagaalo iyo duqeymo kala duwan ayaa xalay ka dhacay degaano ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, kuwasoo dhexmaray ciidamada dowlada, kuwa AMISOM iyo Itoobiya oo hal dhinac ah iyo xoogaga ka horjeeda ee Al-Shabaab.
Wararku waxay sheegayaan in dagaalku uu ka dhacay degaanka Goof Guduud oo in ka badan 20km ka baxsan magaalada Baydhabo ka dib markii xoogaga Al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dowlada Somalia ku leeyihiin degaankaas.
“Dagaalku waxaa uu socday ku dhowaad labo saacadood hub kala duwan ayaa la isku adeegsaday khasaare dhimasho iyo dhaawac leh waa jiraa hase ahaatee tiro sax lagama haayo” sidaas waxaa warbaahinta u sheegay goob jooge ka mid ah dad degan tuulooyin ku dhow degaanka lagu dagaalamay ee Goof guduud.
Dhinaca kale, kooxo hubeysan oo la aaminsan yahay iney ka tirsan yihiin xoogaga Al-shabaab ayaa isla xalay madaafiic hoobiyeyaal ah ku weeraray garoonka dayuuradaha magaalada Baydhabo oo ku yaala duleedka magaaladaas, halkaasoo ay degan yihiin ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada Somalia.
Ciidamada AMISOM kama jawaabin madaafiicdaas, lamana oga khasaaraha ay geysteen, hadalna kama soo saarin hase ahaatee Afhayeenka Al-shabaab ee dhinaca milateriga Shiikh C/casiis abuu Muscab ayaa sheegay in labada weerarba ay iyagu ka dambeeyeen ayna khasaare ku gaarsiiyeen ciidamadii ka soo horjeeday.
Xarakada Al-Shabaab oo ku hanjabtay iney sii wadeyso qaraxyada ay la beegsaneyso xarumaha dowlada
Afhayeenka Al-shabaab ee dhinaca ciidamada Shiikh C/Casiis Abuu Muscab ayaa sheegay iney sii xoojin doonan weerarada isqarxinta ah ee ay la beegsanayaan xarumaha ay degan yihiin madaxda dowlada iyo ciidamada AMISOM.
Abuu Muscab ayaa intaa ku daray in qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay nin naftiisa biimeeyey uu ka fuliyey agagaarka madaxtooyada uu muujinayo awooda ay Al-shabaab u leeyihiin iney weerari karaan meel kasta oo Muqdisho ka tirsan xitaa meelaha sida weyn loo weyn loo ilaaliyo.
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkan uu qayb ka yahay weerarada ay doonaayaan inay ku cirib-tiraan Saraakiisha dowlada iyo kuwa shisheeye ee taageeraya, isagoo xusay inuusan heli doonin goob uu uga badbaado.
“Mujaahidiinta goob walba oo uu cadowgu galo, kama harayaan wey ka dabagelayaan xitaa haddii ay tahay goobaha ammaankooda aadka loo ilaaliyo sida Madaxtooyada iyo xarunta Xalane” ayuu yiri Shiikh C/casiis abuu Muscab.
Dhinaca kale, Afhayeenka Al-shabaab ee dhinaca ciidamada Shiikh C/Casiis Abuu Muscab ayaa guulo ka sheegtay dagaalo degaano ka tirsan gobolada Bay, Bakool, Gedo iyo Jubada hoose ku dhexmaray ciidamadooda iyo kuwa dowlada oo taageero ka helaya kuwa shisheeye.
Midowga Afrika oo sheegay in Al-shabaab ay qaraxyo ka geysan rabaan degaanada Somaliland
Wakiilka Midiowga Africa u qaabilsan Somalia Maxamed Saalax Anaadiif ayaa sheegay iney soo gaartay warbixino sheegaya in shaqsiyad ka tirsan Al-Shabaab ay maleegayaan weeraro ay ku qaadaan maamulka Somaliland degaano ka tirsan.
Anaadif ayaa intaa ku daray in xubno ka tirsan Shabaab ay ku sugan yihiin degaanada hoos taga Maamulka Somaliland, kuwaasoo uu sheegay inay damacsan yihiin weeraro ay ka geystaan halkaasi, iyagoo eeganaya goobo ay la beegsadaan.
Dhowaan ayey aheyd markii dowlada Ingiriiska ay uga digtay muwaadiniinteeda iney sii joogaan degaanada hoos taga maamulka Somlilnad sababo la xiriira suuragalnimada weeraro argagaxiso oo ka dhaca magaalooyinka maamulkaas qaarkood.
Wasiirka arrimaha dibeda ee Somaliland Maxamed C/llaahi Cumar ayaa ku tilmaamay digniinahaas kuwo lala yaabo, isagoo xusay ineysan jirin khatar dhinaca amniga ah oo degaanada maamulkaas ka jirta, “Xaalada amaanka Somaliland waa mid su buuxda u sugan oo aad u wanaagsan ayuu yiri wasiirka.
Maxamed C/llaahi Cumar wasiirka arrimaha dibeda Somaliland ayaa sheegay in maamulkiisu uu leeyahay heyaddo dhinaca amaanka qaabilsan oo dhameystiran sida Boolis, nabad sugid ku baahsan degaanada maamulkiisa hoostaga oo dhan aysana jirin illaa hadda dhibaato soo fool leh oo ay ka war qabaan.
Dhinaca kale, wakiilka Midowga Afrika ayaa sheegay in Al-shabaab markii ay ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada ay bilaabeen qorsheyaal ay ku sii wadayaan dagaalka, wuxuuna xusay sheegay inay ka warhayaan weeraro hor leh ay Shabaab ay damacsan yihiin inay geystaan
Haweeney ku nool Dalka Mareykanka oo Caadeysatey inay cunto timaha Bisadaha arintaas oo la yaab Noqotay(Daawo Muuqaal+Warbiixn)
Haweeney ku nool dalkaas Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inay caadeysatey oo ay jeceshahay inay cunto timaha mukulaalaha ama bisadaha arintaas oo ay la yaabeen dad badan oo ku nool aduunka.
Haweeneydaan oo lagu magacaabo Lisa oo 43 sano jir ah kuna nool magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee dalkaas Mareykanka oo lagu soo bandhigay barnaamijka lagu magacaabo My Strange Addiction ama (caadadeyda la yaabka leh) ee ka baxa telefishinka TLC ee dalkaas Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inay jeceshahay oo ay ka hesho inay cunto timaha mukulaalaha ama yaanyuurada iyadoona sheegatay inay timaha bisaduhu ay yihiiin wax cajiib ah oo macaan islamarkaana u wanaagsan dhadhankooda carabka, Haweeneydaan oo leh bisad ayaa waxay timaha bisadaas ay ka soo aruursataa meelaha ka mid ah guriga ee ay ku daateen timaha yaanyuurtaas iyadoo ka dibna cunto timahaas, Haweeneydaan oo mudo ilaa iyo 15 sano ka badan cuneysay timahaas ayaa waxaa la sheegay inay maalin kasta ay cunto kuus ka mid ah timaha ka rifmay mukulaashaas iyadoona sheegtay inay labadii saacadoodba ay mar u baahan tahay inay cunto timahaas.
Ugu dambeyntiina iyadoo haweeneydaan ay sheegtay ina cunitaanka timaha mukulaashu ay yihiin kuwo raaxo leh oo uuna qofku dareemaayo nasasho ayey haweeneydaan marka ay weyso timahaas oo daadsan guriga dhexdiisa waxay isticmaashaa inay leefto bisadeeda oo ayna ku qaadato carabkeeda timaha mukulaashaas oo fresh ah iyadoona sheegtay inay yihiin kuwo noocaas ah timaha ugu wanaagsan ee ay cunto haweeneydaan iyadoo ku tilmaantey timahaasi inay la mid yihiin oo kale sidii suufka oo kale, Barenaamijka ku saabsan haweeneydaan timaha cuneyso oo faahfaahsan ayaa waxaa uu ka bix i doonaa teleefishinkaas TLC bisha soo socoto ee Feberaayo 13 keeda hadii alle idmo.
Ninkii isqarxiyey Villa somalia Suurado Naxdin Ah 18+ qofkii aan awood ulaheen inuu daawado hagalin.
War Deg Deg Ah Weerar Ismiidaamin ah oo goordhaw ka dhacay Xarunta Madaxtooyada Villa Somalia ee Muqdisho
Waxaa Goordhaw Qarax Ismiidaamin ah uuka dhacay afaafka hore ee Xarunta Madaxtooyada Villa Somalia gaar ahaan koontaroolka labaad ee laga galo Xarunta Madaxtooyada.
Qaraxa ayaa ahaa mid aad u xoogan oo laga maqlay qeybo badan oo kamid ah Magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in uu isku qarxiyay halkaasi Nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa .
Halka uu qaraxu ka dhacay ayaa hada waxaa xiray Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada waxaana halkaasi laga qaaday dad uu waxyeelo gaarsiiyay qaraxaasi inkastoo aan iyana si rasmi ah loo ogeyn qasaaraha ka dhashay Qaraxan.
Qaraxa ayaa goob joogayaal kusugan Madaxtooyada waxa ee ku waameen in lala doonayay in lagu qaado Guriga uu Madaxtooyada Villa Somalian ka dagan yahay Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya , qaraxa ayaana ka dhacay meel ku dhaw guriga R/Wasaaraha iyo halka eek u taal Safaarada Itoobiya .
Dhagayso Raysalwasaare Saacid oo looga DIgay inuu Yimaado Garoowe.Maxay tahay sababta?
Gollaha Samatabixinta Puntland ayaa ku hanjabay hadii lagu kalifo inay dagaal galaan inay u diyaarsanyihiin Ciidamo tababaran isla markaasina waxay xuseen Ciidamadoodu inay joogaan deegaano ka tirsan Gobolka Bari gaar ahaan Magaalada Boosaaso iyo deegaano kale oo ka tirsan Puntland.
Maxamed CilmiCabdalla Gudoomiyaha gudiga Samatabixinta Puntland oo Caawa oo Isniin ah 28-Janaayo-2013 Waraysi gaar ah siinayay Warbaahinta Qaar
ayaa sheegay Xukuumadda uu hormuudka u yahay Madaxwayn Faroole inay fiirin wayday danaha Puntland, wuxuuna ku goodiyay dhawaan inay go’aan cad ka qaadan doonaan arinta Puntland.
Wuxuu sheegay Maxamed CilmiCiidamadda gollaha Samatabixinta Puntland inay ku suganyihiin deegaanada Puntland oo dhan isla markaasina ay kaliya
fiirinayaan danaha Shacabka reer Puntland, wuxuuna intaasiraaciyay Ciidamadoodu inay awood u leeyihiin iska dhifaacidda culays walba oo kaga yimaada dhinaca Maamulka Faroole, isla markaasina wuxuu ku baaqay in sharciga la ilaaliyo hadii howshu sidaan ku socotana gacmaha la iskula tagi doono.
HALKAN KADHAGAYSO CODKA QARSOON EE DIGNIINTA AHMaxamed CilmiCabdalla ayaa Dhanka kale ka digay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid inuu Arbacada soo gaaro deegaanadaPuntland wuxuuna xusay arintaasi inay Muraalka u toosinayso Xukuumadda Faroole oo uu sheegay Shircigii u yaalay Puntland inay ku tumatay.
Madaxweynaha Somalia iyo wafdigii uu horkacayey oo ka degay magaalada Brusells ee dalka Bilgium
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay maalintii labaad ka qeyb galay shirka Midowga Africa lagu soo gebagebeeyey Addis Ababa ayaa xalay u duulay Xarunta Midowga Yurub (EU) ee Brussels dalka Belgium.
Raisul Wasaare Ku Xigeenka ahna Wasiirka arimaha dibadda Marwo Fawziyo Yusuf Aadam, Wasiirul Dowlaha Madaxtooyadda Mudane Faarax Sh. Cabdul-Qaadir, Safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiyo Mudane Siciid Yusuf Nuur, iyo qaar ka mid ah la-taliyayayaasha Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku wehliya safarla Madaxweynaha.
Kulankan Midowga Afrika oo xalay la soo afjaray ayaa Soomaaliya u noqonayso mid taarikhi ah maadaama Madaxweynaha lagu casuumay inuu khudbad dheer oo ka hadlayso arimo badan oo muhiim ah ka jeediyo shirka oo ay ka mid yihiin Amniga, la dagaalanka Musuqmaasuqa deris-wanaag iyo horumar.
Safarka Madaxweyne Xassan Sh. Maxamud iyo wafdiga uu hogaaminayo ay xalay ugu dhoofeen Xarunta Midowga Yurub (EU) ee Brussels ayaa nyimid ka dib markii ay casuumaad rasmi ah ka heleen ururka Midowga Yurub. Madaxweynaha ayaa wuxuu kulamo la qaadan doonaa Madax kala duwan ee ka tirsan Midowga Yurub (EU).
Safaradda Madaxweynaha ayaa qeyb ka ah Lixda Tiir Siyaasadeed ee dowlladda oo ku aadan in sare loo qaado xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dalalka caalamka. Waxaa mudan in hoosta laga xariiqo in dhamaan Madaxda Dowladdaha Afrika, Xoghaya Guud ee Qaramadda Middobay, iyo Midowga Yurub ay aad u soo dhaweeyeen safarkii uu Madaxweynaha ku tagay dalka Maraykanka iyo aqoonsigii dhawaan dalkaas uu aqoonsaday Dowladda Federaalka Soomaaliya ka dib muddo kor u dhaafaysa 20 sanno.
Shirkii madaxda Afrika oo xalay Addis ababa lagu soo gebagebeeyey iyo war-murtiyeed laga soo saaray
Waxaa xalay lagu soo gabagebeeyey magaalada Addis ababa ee dalka Itoobiya shirkii madaxda Midowga Afrika halkaas uga socday mudada labada maalin ah kaasoo ay ka qeyb galeen inta badan madaxweynayaasha Qaarada Afrika.
Shirkan oo ahaa mid albaabadu u laaban yihiin ayaa madaxda Afrika waxay ku lafa gureen wax ka qabashada dhibaatooyin ka jira Qaarada afrika, gaar ahaan Dalalka Maali, labada Suudaan, Somalia iyo meelo kale oo xasarado ay ka jiraan.
Gudoomiyaha cusub ee Midowga Afrika sanadkan oo ah raisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desilgn ayaa gebagebadii shirkaas ka akhriyey War murtiyeed ka soo baxay shirka kaasoo lagu amaanay horumarka dowlada Somalia ay ka gaarrtay dhinaca sugida amaanka.
War murtiyeedka ayaa waxaa dhinaca kale taageero loogu muujiyey dalka Maali oo ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowlada oo gacan ka helaya kuwa Faransiiska iyo kooxo Islaamiyiin ah oo lagu eedeeyo iney xiriir la leeyihiin Ururweynaha Al-Qaacida, waxana midowga Afrika uu soo jeediyey in dalkaas loo diro illaa lix kun oo askari si ay gacan u siiyaan ciidamada dowlada Maali.
Nin Sacuudiyaan ah oo ula dhaqmay Nin Masaakiin ah si xun oo ka baxsan bini'aadanimada(Daawo Muuqaal+Warbiixn)
Nin u dhashay dalkaas Sacuudi Carabiya ayaa waxaa la sheegay inuu si xun oo ka baxsan bini'aadanimada uu ula dhaqmay nin miskiin ah oo dalkaas ka shaqeysanaayey asagoona uu ninkaas uu u geystay aflagaado caay islamarkaana uu wajiga ka candhuufaayey oo uuna ku qasbay inuu lugaha ka shumiyo xilli uu ninkaas si degan uu u baryootamaayo.
Ugu dambeyntiina iyadoo dalkaas Sacuudi Caribiya uu yahay mid mar walba ay ka dhacaan waxyaabo fara badan oo ka baxsan Islaanimada iyo bini'aadanimada ayaa waxaa la sheegay in ninkaas miskiinka ah uusan wax talaabo ah qaadi karin maadaama uu ka baqaayo inay arinta sidaas ka sii xumaato oo xabsi la dhigo islamarkaana laga musaafuriyo dalkaas uu usoo xammalashada tegay, dowlada Sacuudiga ayaa waxaa la sheegay in kastoo ay ka warheyso tacadiyada ay dadkeeda ku hayaan aajanabiga ka shaqeysta dalkaas ayeysan hadana jirin cid wax ka qabata arintaas iyadoona ay dadku ku nool yihiin cabsi joogta ah iyo maxaan la kulmi doonaa maantana.
Saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay wadaan baaritaanno xooggan oo lagu ogaanayo dadka ka danbeeya dilalka magaalada Muqdisho loogu geeysto wariyeyaasha.
Taliyaha laanta danbi baarista dowladda Soomaaliya Gen. C/laahi Xasan Bariise oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay wadaan baaritaanno xooggan oo ay ku doonayaan in ay kusoo qabtaan dadka ka danbeeya dilaka gudaha magaalada Muqdisho loogu geeysto suxufiyiinta.
Masuulkani ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay u xilsaartay in hay’adiisa ay baaritaanno kusoo sameeyso cidda ka danbeeysa dilkii ugu danbeeyay ee magaalada Muqdisho loogu geeystay wariye Cabdi Xareed Cismaan Aadan iyo kuwii ka horeeyayba, wuxuuna xusay in baaritaanku u marayo meel fiican.
“Waxaa loo xil-saaray hogaanka baarista danbiyada in wariyihii hadda ugu danbeeyay iyo wariyeyaasha dilkooda si deg deg ah kiiskooda wax looga qabto, waana ku raad joognaa,” ayuu masuulkani hadalkiisii raaciyay.
Sidoo kale taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Gen. Shariif Sheekhunaa Maye ayaa isna sheegay in ay gacanta kusoo dhigi doonaan kooxaha ka danbeeya dilalka wariyeyaasha, wuxuuna xusay in arintaasi ay ka ballan qaadeen dowladda.
Taliyaha ayaa sheegay in howsha baaritaanka ay imika socoto uuna ku rajo weynyahay in ay ku guuleeysan doonaan, wuxuuna ka codsaday suxufiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed in ay gacan ka siiyaan ciidamada booliska iyo danbi baarista sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dadkaasi caadeeystay dilalka wariyeyaasha.
Hadalkan kasoo yeeray saraakiisha ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli 18-kii bishan gudaha magaalada Muqdisho lagu dilay Allaha u naxariistee Wariye Cabdi Xareed Cismaan Aadan, kaasoo ay toogteen kooxo ku hubeysan baastoolado, waxaana dilka wariyahani uu yahay kii ugu horeeyay ee sanadkan, iyadoona sanadii tagtay gudaha dalka Soomaaliya lagu dilay ku dhowaad 18-wariye kuwaasoo qaar badan oo kamid ah aan la garanayn cidda ka danbeeyso dilkooda.
Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda ku sugan Somaliland inay si dhaqso ah uga baxaan halkaas, kaddib markii ay soo baxeen sida warbixinta lagu xusay khataro cusub oo kusoo food leh dadka reer galbeedka ah ee Somaliland ku sugan. Iyadoo naamulka Somaliland uu arrintaas ka hadlay.
Madaxweynaha Soomaaliya oo Taageero ku dalbaday Khudbad uu ka jeediyay Shir-madaxeedka Ururka Midowga Afrika
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dheer ka jeediyay kulanka Midowga Afrika ee shalay ka furmay magaalada Addis Ababa ee xarunta Itoobiya ayaa ka dalbaday dalalka Afrika inay gacan siiyaan Soomaaliya, isagoo xusay in Soomaaliya ay dib ugu soo laabatay beesha caalamka doorkeedana uu yahay mid aan la yareysan karin.
Dhanka kale, ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Hailemariam Desaleng ayaa la wareegay guddoomiyaha sanadlaha ah ee Midowga Afrika, isagoo xilkaas kala wareegay madaxweynaha Peru oo sannadkii lasoo dhaafay guddoomiye u ahaa ururka.
Howlgallo ay ciidamada Dowladda Somalia ka sameysteen oo lagu Qabqabtay ciidammo dhac u geysta Shacabka
Howgallo ay ciidamada dowalddu ka sameeyeen maanta degamada Hodan, gaar ahaan xaafadda Taleex illaa tarabuunka ayay kusoo qabqabteen 13-ruux oo sagaal ka mid ah ay ahaayeen ciidammo ka tirsan kuwa dowladda iyo afar qof oo shacab ah.
Kooxahan la qabqatay ayaa la sheegay in toddoba ka mid ah ay ahaayeen ciidamada xoogga dalka, laba ka mid ah booliis iyo afar qof oo saraakiisha booliisku ay sheegeen inay dhici jireen dadka shacabka ah.
“Waxaa suurogashay in 13 ruux oo burcad ah lagu soo qabqabto howlgallo ay sameeyeen ciidamada dowladda, kuwaasoo caadeystay inay maalin iyo habeen dadka dhacaan,” ayuu yiri taliyaha booliiska Soomaaliya, Shariif Sheekhunaa Maye oo warbaahinta kula hadlay goob lagu soo bandhigay kooxdan burcadda ah.
Taliyaha ayaa sheegay in muddo dheer lagu soo wargelinayay inay dadkan dhac ka geysanayeen inta dhexeysa xaafadda Taleex iyo Tarabuunka oo ka tirsan degmada Hodan, iyadoo sheegay inay sii socon doonaan howgallada ay kusoo qabanayaan kooxaha dhibaatooyinka geysanaya.
Dhanka kale, hay’adda nabadsugidda ayaa iyaduna soo bandhigtay 10-ruux oo la sheegay in looga shakiyay inay xiriir la leeyihiin Al-shabaab, kuwaasoo laga soo dhex-saaray 500-qof oo lagu qabtay howlgallo shalay laga sameeyay degmooyin ka tirsan Muqdisho.
Ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay howgallo kawadeen degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaasoo ay kusoo qabqabteen xubno ay uga shakiyeen inay Al-shabaab xiriir la leeyihiin.
Ciidamada Badda Puntland oo Howgallo ay sameeyeen Gobolka Mudug kusoo qabqabtay Kooxo Burcadbadeed ah
Ciidamada Puntland ayaa howgallo ay ka sameeyeen deegaanno ka tiran gobolka Mudug waxay kusoo qabqabteen 10 ruux oo burcadbadeed ah, iyagoo sheegay in howgalkan uu ahaa mid ay kula dagaalamayeen burcadbadeedda.
Howgalkan oo ahaa mid saf-ballaaran ah ayay ciidamadan ka sameeyeen deegaanno hoostaga degmada Jarriiban, iyagoo saraakiisha howgalkan hoggaaminayay ay sheegeen in kooxahan ay dhibaatooyin ku hayeen dadka ku nool deegaanka.
“Howgalkan wuxuu ahaa mid lagula dagaalamayay kooxaha burcad-badeedda ah oo dhibaatooyin ku haya dadka ku nool deegaanno ka tirsan gobolka Mudug,” ayuu yiri sarkaal u hadlay maamulka gobolka Mudug ee Puntland.
Burcadbadeeddan ayaa lagu xiran xabsiga dhexe ee magaalada Gaalkacyo, iyadoo lagu wado in maxkamad la horgeeyo, balse saraakiisha gobolka Mudug waxay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan xilliga kooxahan la horgeyn doono maxkamadda.
Dhanka kale, saraakiisha gobolka Mudug ee Puntland waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howgallada ay kula dagaalamayaan burcadbadeedda si ay u qafiifiyaan dhibaatooyinka ay burcaddu ku hayaan dadka iyo deegaanka.
Puntland oo ka mid ahayd goobaha ay saldhigyada waaweyn ku lahaayeen kooxaha burcadbadeedda ah ayaa waxay sanadkii hore billowday dowladda halkaas ka talisa dagaal ay la galeen kooxaha burcadbadeedda ah, iyadoo soo qabqabtay tiro burcadbadeed ah.
Maamulka Gobolka Banaadir oo shaaciyay inay dayactir ku sameyn doonaan guud ahaan Waddooyinka Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay dayacatir ku sameyn doonaan guud ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho oo aan wax dayactir ah helin tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya muddo laga joogo 22-sano.
Afhayeenka maamulka gobolka oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in tani ay fududeyn doonto in culeyska uu ka dego jidka Maka Al-mukarma oo ah jidka ugu mashquulka badan Muqdisho, iyadoo ay ku kordhayaan shilalka gaadiidka.
“Maamulka gobolka Banaadir waxaa u qorsheysan in dayacti lagu sameeyo guud ahaan waddooyinka Muqdisho sida waddada Wandaha iyo soddonka si loo yareeyo iriiriga ka jira wadada Maka Al-Mukarama,” ayuu yiri Maxamed Yuusuf.
Sidoo kale, afhayeenku wuxuu hadalkiisa ku darya in dayactirka waddooyinka ay qayb ka yihiin dayactirka magaalada lagu sameynayo iyo soo celinta bilicda magaalada Muqdisho.
Taliska taraafikada Muqdisho ayaa iyaguna sheegay in shilalka ka dhacaya jiddka Muqdisho ay soo kordhayaan, taasoo ay ku macneeyeen inay sabab u tahay gaadiid fara badan oo magaalada la keenay iyo nabadda ka jira caasimadda Soomaaliya.
Waxaa muuqanaysa in gaadiidka ay kusoo badanayaan magaalada Muqdisho iyadoo la arkayo haween iyo rag gadiid kuwa raaxada ah ku wata guud ahaan jidadka Muqdisho, iyadoo tani ay muujinayso in tartan ku saabsan wadista gaadiidka oo u dhexeeya ragga iyo dumarka.
Jidadka Muqdisho ayaa burbursan iyadoo dhismayaasha hareeraha jidadka ku yaalla ay yihiin kuwo qurxoon oo la dayactiray, waxaana tani ay caddeyn u tahay in bulshada aysan u arag laamiyada inay yihiin kuwo ay iyagu leeyihiin.
Shir Madaxeedkii Ururka Midowga Afrika oo si rasmi ah uga furmay Magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya
Shir madaxeedka ururka Midowga Afrika ayaa maanta oo Axad ah ka furmay xarunta ururku uu ku leeyahay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, iyadoo shirkaas uu Soomaaliya uga qayb-galayo madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxda Afrika ayaa diiradda ku saari doona shirkooda sannadkan dagaallada ka socda dalka Maali iyo ka bixitaanka Soomaaliya ay ka baxday xilligii KMG ahaa iyo aqoonsiga uu Mareykanku siiyay iyo weliba wax-qabadka dowladda Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa lagu wadaa inuu shirka ka jeediyo khudbad uu ku sharraxayo xaaladaha ka taagan dalka Soomaaliya, howlgalka ciidamada Midowga Afrika ay ka wadaan gudaha dalka, wixii dowladda u qabsoomay iyo sidoo kale waxyaabaha ay dowladda Soomaaliya uga baahan tahay dalalka Afrika.
Shirka ayaa waxaa guddoominaysay haweeneyda ugu horreeysay oo loo doorto guddoomiyaha ururka Midowga Afrika tan iyo markii la saasaasay muddo hadda laga joogo 50-sano oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika, iyadoo sheegtay in shirka ay sannadkan uga doodayaan ajandayaal badan.
Xarunta ururka Midowga Afrika ayaa waxaa ku sugan madaxda in ka badan 40-waddan oo Afrikaan ah, iyadoo ay ka maqan yihiin madax caan ahaa oo shirka hormuud u noqon jiray sida ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya, Meles Zenawi oo geeriyooday
Safiirka Somaliya ee Kenya Dajire Cali amerika oo soo dhaweeyay hadalkii ka soo Yeeray Raisal Wasaaraha Kenya, sheegayna in aysan jirin Raaf uuna la Kulmay Wasarada arimaha dibada, sawiro
Xili maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen Warar sheegaya in soomaalida dagan Kenya gaar ahaan islii lagu Celin Doono Xerooyinka Qaxootiga kadib markii Warqad si ah laga helay xafiiska Madaxweynaha Kenya ayaa waxaa arintaas ka hadlay Mas’uuliyiin ka tirsan Dowlada Kenya.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya Dajire Cali amerika ayaa arintaas waxba kama jiraan ku tilmaamay waxa uuna sheegay in aysan Jirin Xiligan arintaan, waxa uuna meesha ka saaray in dadka Macno daro la iska qab qabto.
Cali amerika ayaa sheegay in arintaas ay ka hadleen Madaxda Dowlada Kenya gaar ahaan Raisal Wasaaraha Kenya Raila Odinga Gudoomiye-ku-xigeenka barlamaanka Kenya faarax macalin iyo Maxkamada dalka Kenya oo sheegtay in aysan arintaas waxba ka jirin.
“ Waxaan la sheegayo waa waxba kama jiraan aniga waxaan la kulmay Wasaarada arimaha dibada waxayna ii sheegeen in aysan arintaas Jirin oo ay tahay Been abuur, Raisal Wasaaraha dalka Kenya asagana waa ka hadlay, Maxkamada Kenya waan kala hadalay arintaas waxayna noo sheegeen in aysan arintaas jirin”ayuu yiri safiirka Soomaaliya ee Kenya ee Soomaaliya C/shukri Cali Xirsi.
Sidoo kale Danjire Cali amerika ayaa waxa uu maalmihii la soo dhaafay sheegay in uu dadaal ugu jiray sidii arintaas uu kala Xaajoon lahaa Dowlada Kenya in dadka Soomaaliyeed aan la cabsi galin.
Danjire amerika ayaa sheegay in Qaxootiga Soomaaliyeed ee jooga Kenya ay xaq leeyihiin ayna ku joogaan sharci ahaan, ayna jirin in si qasab ah lagu bixin karo ama la raafi karo.
“ Dadka waxaa Aqoonsan caalamka waa Qaxooti haday qaxooti yihiin sharci ayay ku joogaan Kenya aduunka ayaa Aqoonsan marka Kenya dadka kuma Xadgudbi karto”ayuu markale Yiri Safiirka Soomaaliya ee Dowlada Kenya.
Waxa uu sheegay Danjire amerika in dadka Soomaaliyeed ee Dagan Kenya gaar ahaan islii ay is dajiyaan oo aysan dhibaato Jirin.
Shir-jaraa'id: Wasiirka Afrika Ee Britain iyo Ka Arimaha Dibedda Somaliya Oo Shaaciyey Qodobadda Shirka Soo Socda Ee London Iyo Qaabka Somaliland Uga Qayb-galayso.
Kadib markii uu soo dhamaaday kulan aan caadi ahayn oo ay magaaladda Addis ababa ku yeesheen xubno ka tirsan Midawga Afrika, IGAD iyo Beesha Caalamka oo si gaara loogu xisaaray inay faaqidaan arimaha Somaliya, ayaa shir-jaraa'id ay wada qabteen Wasiirka Arimaha dibedda Somaliya Fawsiya Yuusuf X. Aadan iyo Wasiirka Afrika ee Britain Mark Simonson's.
Xog shabakadda ramaasnews heshay ayaa Ugu horeyn waxa ka hadlay Wasiirka Afrika ee Britain, waxaana uu yidhi: Waxaanu yeelanay kulan jawi wanaagsan ku dhacay oo dhex-maray guddi gaara oo isla qaadaa dhigay qodobadda muhiimada la siinayo shirka soo socda ee London oo noqonaya shirkii Labaad, waxaana uu dhacayaa Todobadda Bisha May ee sanadkan.
Shirkaas waxa wada guddoomin doona madaxweynaha Somaliya iyo raysal wasaaraha Britain, qodobada asaasiga ah ee looga hadli doono shirka waxa ka mid ah: Waa inaan xaqiijinaa inaan helo wada shaqeyn caalamiya oo laga yeesho kor u qaadista dawladda Somaliya, sidii ay amaanka u wada hanan lahayd.
Mark Simons waxa uu si taxadar leh uga hadlay qaabka kasoo qaybgalka shirkaas, waxaana uu ka jawaabayey su'aal ahayd in dhinacyadii Somalida ee ka soo qaybgalay shirkii hore ee London ay ka soo wada qaybgeli doonaan shirkan soo socda ee dhacaya bisha May. Waxa uu yidhi shirku waa mid aanu wada guddoomineyno waa Somaliya iyo Britain-ne, waxaana aanu wadajir uga shaqeynaynaa cidda la marti qaadayo, laakiin waxaan rajeynayaa in wakiiladda qaybaha kale ee Somaliya ay si buuxda uga soo qaybgeli doonaan shirka, sida shirkii hore. Mid ka mid arimaha aan rajeynayo in shirka looga hadli doonana waxa weeyaan, in munaaqishooyin ay dhex-maraan dawladda Somaliya iyo Somaliland iyo xidhiidhka qaybaha kala duwan ee Somalida.
Waxa iyaduna shirkaa jaraa'id ka hadashay wasiirka arimaha dibedda Somaliya Fawsiya Yuusuf X. Aadan oo tidhi: Waxa na horyaala hawlo badan, laakiin inaan helno dareenka iyo taageerada caalamka ayaa kalsooni badan na siineysa. Hore ayaanu u soconaa waana aanu isku diyaarineynaa shirka London oo aanu wax ka guddoomin doono. Waxaanay intaa ku dartay mar labaad waxaan aad ugu mahadnaqeynaa Britain iyo wadamada deriska ah iyo waliba urur-goboleedka IGAD ee na taageeray iyo ciidamadda AMISOM.
Fawsiya waxa kale oo ay sheegtay in shirka Addisababa laga taageeray siyaasadda dawladda Somaliya iyo qodobada ay mudnaanta siineyso, oo uu ugu horeeyo amniga oo aanu mudnaan koowaad siinayno, isla markaana aanu u baahan-nahay in aanu lahaano waax amni oo xoog leh. Waxaanay hadalkeeda intaa sii raacisay in AMISOM iyo Itoobiya aanay ogolaan karin in ay Somaliya ka baxaan iyada oo aan dhisanin ciidamada amniga, waana mid kamida qodobadda looga hadli doono shirka London. Somaliya waxa ka jira in ka badan 20.000 oo maleeshiyo ah oo u baahan in ciidanka dawladda lagu daro, waxaanu dooneynaa in qaramada midoobay ay cunaqabateynta hubka ka qaado Somaliya, si ay ciidankeeda u xoojiso.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa sheegay in midnimada Soomaaliya ay tahay mid laga maarmaan ah oo howlaha horyaalla dowladda ay ka mid yihiin sidii midnimada ummaddan loo ilaalin lahaa.